Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa daah furay shirweynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka(Daawo Sawiro) | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa daah furay shirweynaha Qaran ee dib u...
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa daah furay shirweynaha Qaran ee dib u eegista Dastuurka(Daawo Sawiro)
Kusimaha Madaxweynaha ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa maanta si rasmi u daah furay shirweynaha Qaran ee geeddi-socodka dib u eegista Dastuurka, kaasoo socon doona illaa 15-ka bishan.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha dastuurka iyo Guddiyada Dastuurka ee labada Aqal ayaa waxaa ka soo qeyb galay Guddoomiyaha Aqalka sare Cabdi Xaashi cabdullaahi, Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, Guddoomiyeyaasha Baarlamaanada dowlad goboleedyada qaar, Wasiirada arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada iyo 300 oo ergooyin ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa.
Inta uu socdo shirkan ayaa waxaa si gaar ah diiradda lagu saari doonaan dib u eegista iyo turxaan bixinta Dastuurka KMG, iyadoo ay doodo adag ka yeelan doonaan ka qeyb galayaasha qodobada dastuurka ee u baahan qabyo tirka.
Dowladda Federaalka ayaa laga sugayaa in sanadkan ay dhameystirto qabyo-tirka Dastuurka, isla markaana dastuurka noqdo mid loo dhan yahay oo ugu dambeyn loo qaado afti dadweyne.
Previous articleMadaxweynaha Hirshabelle oo gaaray magaalada baydhaba
Next articleMadaxweynaha Galmudug oo gaaray magaalada baydhaba